Siza kugalela imali eyi- € 80 ngonyaka kwiVenkile ye App ngo-2020 | IPhone iindaba
Siza kugalela imali eyi- € 80 ngonyaka kwiVenkile ye App ngo-2020
Ivenkile yeVenkile ye-iOS iyeyona ndawo ineziqhamo esineziqhamo kule minyaka imbalwa idlulileyo. Ngaphandle kwento yokuba ukhuphiswano lunenani elikhulu lokukhuphela kunye nokusetyenziswa, inyani yemali yahlukile.
Oko kwaqala ukuthengwa kwangaphakathi nohlelo, indlela esityala ngayo imali yethu kwizicelo eziphathwayo ikhule kakhulu. Kakhulu kangangokuba kulindeleke ukuba sichithe imali eyi- € 80 ngonyaka kwizicelo eziphathwayo nge2020.
Isensor tower iyaqhubeka ukubala ukuba imeko yenkqubo yeselfowuni iza kuphucula kwaye iqhubeke njani. Kwaye yeyokuba sifumana ipanorama enomdla kakhulu, kuba ngaphakathi Abasebenzisi be-2017 batyale umndilili we-60 euros ngeendlela ezahlukeneyo ngaphakathi kweVenkile yeApp. Ewe kunjalo, kufuneka sikhumbule ukuba ukuthengwa kwangaphakathi nohlelo kuhamba ngeApple.
"Abasebenzisi eUnited States of America bazakutyala imali efikelela kwi- $ 88 ngonyaka kwizicelo nakwezinye izinto ezithengiweyo ngo-2020 ngokweenkcukacha zakutshanje ezivela kwibhanki yezobuntlola yaseSensor Tower. "
Amanani anokusongamela, kodwa akufuneki silibale ukuba kwimeko ka-Apple, nokuhlawulela ubhaliso lweNetflix ngesicelo kunokuthathwa njengokuthenga kwaye inkampani yaseCupertino izingela ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-30 zeenzuzo eziveliswe kwityala. Siphila kwihlabathi eliqhakamshelanayo kwaye oku kusenza sisixabise ngokwenene isidingo sezicelo ezithile kwindawo yethu yobuqu kunye neyobungcali, yindlela ezisebenza ngayo iimodeli zobhaliso kunye nokunye okuvelisiweyo. Yiba njalo, imarike yesicelo iyakhula kwinqanaba lobundlongondlongo, iphantse yaphindaphindeka kwiminyaka nje emine, kangangokuba ezinye iimarike ezinjengemidlalo yevidiyo zikopa iifomula. Kucacile ukuba ubomi bethu bujolise ngakumbi kwizicelo, ukanti i-euro ezingamashumi asibhozo ngonyaka ibonakala inethemba kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Siza kugalela imali eyi- € 80 ngonyaka kwiVenkile ye App ngo-2020
Uhlobo lwe-iOS luhlaziywa ngeendaba ezibalulekileyo